NL (ခ) ဒီအမောင်: 05/22/12
ဘာမှမပိုင်တဲ့ ကျွန်တော့ ဘဝကြီးထဲမှာ
လျို့ဝှက်သေတ္တာလေး တစ်လုံးတော့ ပိုင်တယ်။
အထဲမှာ မြတ်နိုးမှုတွေရှိတယ် ဖွင့်ပြဖို့တော့ မရည်ရွယ်ဘူး
မွန်းကြပ်လွန်းပြီး ဘဝ အဓိပ္ပါယ် ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။
ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ ကျွန်တော့ အနာဂတ်ထဲမှာ
လျို့ဝှက်ကြယ်လေး တစ်လုံး ရှိတယ်။
အဲဒီ ကြယ်လေးကို ရင်ဖွင့်မိတယ်။
Posted by nllamin.com at 4:42 AM
ကန်းနေတဲ့ နှလုံးအိမ်ကို အဆန်းတွေ ပေးသူ
မမြင်ရလို့ ဟိုစမ်း ဒီစမ်း
သူက ကျွန်တော့် နှလုံးသားအိမ်ထဲကို
Posted by nllamin.com at 4:41 AM
နံနက် ၁၀နာရီခွဲ၊ မေလ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် (YPI)
မန္တလေးမြို့၌ မေလ ၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၂၁ ရက်နေ့ညများက လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် ဖယောင်းတိုင်များဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခဲ့သူများထဲမှ ဦးဆောင်သူ ၁၉ ဦးကို ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့က ယနေ့နံနက် ၆ နာရီမှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးလျှက်ရှိရာ သတင်းရရှိချိန် နံနက် ၁၀ နာရီထိ ပြန်မလာသေးကြောင်း ခေါ်ယူခံရသူ၏ မိတ်ဆွေတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “မနက်စောစောပိုင်းက လာခေါ်သွားတာ၊ မနေ့ညက ခင်ဗျားတို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးချင်တာတွေရှိလို့ပါ ခဏလေးပါ” ဟု ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့ (SB) မှ ပြောဆိုသွားကြောင်း ပြောသည်။
ယခုလို ခေါ်ယူရာတွင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပင်ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု လည်းဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
Posted by nllamin.com at 4:39 AM
mouse ကိုဘယ်နဲ့မှ သုံးချင်သူများအတွက်
ကိုးကားသမျှကို ရိုးရိုးသားသားလေး ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
from ( http://www.zwekapinmyae.com/profiles/blogs/mouse-1 )
လူတွေက မိမိတို့ အားသန်ရာ ကို ပဲ အသုံးပြုချင်ပါတယ်။
မွေးကတည်းက ဘယ်လက်ကိုပဲသုံးတတ်တဲ့သူဟာ ကွန်ပျူတာမောက်စ်ကို ညာနဲ့ကိုင်ရတယ်ဆိုရင် အတော်လေး ကသိကအောင့်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့နည်းလေက မောက်စ်function တွေ landscape တွေပါ အားလုံးဘယ်ကို ပြောင်းသွားမှာပါ ။
အဆင့် ၁။ Start Menu မှတစ်ဆင့် Control Panel ကိုသွားပါ
အဆင့် ၂။ Control Panel ထဲ မှ Mouse control ကိုသွားပါ ။
အဆင့် ၃။ Mouse Control ထဲမှ switch primary and secondary button ကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်ကျော်သမားအတွက် မောက်စ် ရဲ့ left click ဟာ လက်ညှိုးကို ရောက်သွားသလို right click ကလည်း ညာဘက်မှာကိုင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း လက်ခလယ်ကိုရောက်သွားပါပြီ...။
နောက်တစ်ခုကတော့ ညာလက်နဲ့မောက် ကို right click ပေးတဲ့အခါမှာ User ရဲ့ ညာဘက်မှာ ပေါ်ပါတယ် ။
ဒါကိုလည်း ဘယ်အသုံးပြုရဲ့ ဘယ်ဘယ်မှပေါ်အောင် ထပ်လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။
Posted by nllamin.com at 4:37 AM
သင့်မှာ ကွန်ပျူတာရှိမယ်၊ အင်တာနက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အမေရိကန် ဖုန်းတစ်လုံး အခမဲ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။ သင့် အတွက်
ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် အမေရိကန်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို အခမဲ့ ရရှိမှာပါ။ တကမ္ဘာလုံးကနေ ကိုယ့်ဆီကို ဖုန်းခေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သူငယ်ချင်းက ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ ဖုန်းမြည်သံ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ နားကျပ်လေးနဲ့ပြောရုံပါပဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတာ မရေးသေးခင် သဘောတရားကို အရင်ရှင်းပြပါရေစေ။ အင်တာနက်မှာ SIP Protocol ဆိုတာရှိပါသေးတယ်။
သူက အင်တာနက်ပေါ်မှာ အသံတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ချောချောမောမော စီးဆင်းနိုင်အောင်
အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Protocol ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ SIP Protocol ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Software တွေကို SIP Client လို့
ခေါ်ပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ Software တွေ အားလုံးကိုတော့ SoftPhone (Software Phone) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အများသိတဲ့Skype? Pfingo တို့ဟာလည်း SoftPhone တွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က SIP Protocol ကို အသုံးပြုထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by nllamin.com at 4:33 AM
Mouse မရှိသည့်အခါ ကီးဘုတ်ကို မောက်အဖြစ်ပြောင်းသုံးနည်း
from ( http://www.zwekapinmyae.com/profiles/blogs/mouse-2 )
မိမိကွန်ပျူတာမှာ mouse ပျက်သွားလို့ဖြစ်ဖြစ် မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မောက်သုံးမှ ရမယ့် ကိစ္စတွေမှာ မောက်အခက်အခဲဖြစ်နေရင် အောက်ပါဆက်တင်အတိုင်း ပြောင်းပြီး ကီးဘုတ်က သက်ဆိုင်ရာခလုတ်တွေကနေ မောက်အဖြစ် သုံးလို့ ရပါတယ်။
အောက်ပါ အဆင့်လေးတွေအတိုင်း လုပ်ကြည့်ပါ။
၁။ Alt + Shift + Num Lock ( Alt ကီးရယ်၊ Shift ကီးရယ်၊ ညာဘက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ number lock ကီးရယ်ကို တပြိုင်နက် နှိပ်ပါ)
Posted by nllamin.com at 4:30 AM
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို မောက် မသုံး ကီးဘုတ်မသုံးဘဲ အသံဖြင့်စေခိုင်းနိုင်ပုံ
ကိုးကားသမျှထဲက ရိုးရိုးသားသားလေး ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ပါသည်..
မူရင်းလင့် ( http://www.mmitpalace.com/profiles/blogs/6456788:BlogPost:54410 )
Posted by nllamin.com at 4:29 AM
သင်ချစ်သော ကွန်ပြူတာ အသက်ရှည်အောင် လုပ်ပေးပါ
ကိုးကားသမျှလေးကို ရိုးရိုးသားသား တင်ပြလိုက်ပါသည် လေးစားလျက် (လမင်း)
မူရင်းလင့် ( http://www.voiceofdaegu.org )
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးမှာ Hard disk လေးကောင်းနေဖို့က အရေးကြီးပါတယ် ( သူပြောမှလားနော် ) ၊
ကွန်ပြူတာ အသစ်တွေမှာ သိပ်ပြီး မသိသာသေးပေမယ့် သုံးလာတာ တော်တော်လေးကြာ သွားပြီဆိုရင်တော့ Hard disk အပိုင်းကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ၊
VCD အချပ်တွေ မှာ အိုဟောင်းလို့ဖြစ်စေ ၊ အစင်းရာ အခြစ်ရာ တွေ ရှိနေရင်ဖြစ်စေ ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ အရုပ်တွေ အသံတွေဟာ တုန်တာမှုန်တာ ဆက်မဆွဲတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ် မဟုတ်လား ၊
အဲလိုပါပဲ ကွန်ပြူတာထဲက Hard disk ဟာလဲ သုံးတာကြာလာရင် ၊ File စနစ်နဲ့ Electronic လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာပါ အမှားလေးတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ် ၊ bad sector လေးတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ် ၊
အဲဒီအမှားရှိတဲ့နေရာဟာ မှတ်သားမှုတွေ ကွန်ပြူတာဆိုင်ရာ အချက်အလက် ကူးပြောင်းပေးပို့မှုတွေ မလုပ်ဆောင် နိုင်တော့ပါဘူး ၊ ဒါကြောင့်မို့ hard disk ရဲ့ free space နည်းလာတယ် ၊ ကွန်ပြူတာက မကြာမကြာ ကြောင်လာတတ်ပါတယ် ၊
Posted by nllamin.com at 4:27 AM
လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်သူများ ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့...
Mouse မရှိသည့်အခါ ကီးဘုတ်ကို မောက်အဖြစ်ပြောင်းသုံး...
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို မောက် မသုံး ကီးဘုတ်မသုံးဘဲ အသံ...